Kedu ihe bụ ịhụnanya? | Foundationgwọ Ọrụ |gwọ | Hụnanya, Mmekọahụ na Intanet
Home mmekọrịta Kedu ihe bụ ịhụnanya?
Hụnanya, ma ọ bụ ịhụ ndị ọzọ n'anya ma ọ bụ ịbụ ndị a hụrụ n'anya, na-eme ka anyị nwee mmetụta nke njikọ, nchekwa, zuru oke, zụlitere, ntụkwasị obi, izu ike, ndụ, okike, ikike na dum. O meela ka ndị na-ede uri, ndị na-egwu egwu, ndị na-ese ihe, ndị edemede na ndị ọkà mmụta okpukpe ruo ọtụtụ puku afọ. Ma gịnị bụ ịhụnanya? Nke a bụ ihe na-atọ ụtọ vidiyo na-ese nke ahụ na-egosi anyị otu ọ dị ka ọ dị n’omume.
Ọ bụ ikike kachasị emetụta anyị niile. Ihe megidere ya bu egwu, nke n’egosiputa n’udi di iche dika iwe, nkpasu iwe, ekworo, obi ida mba, nchekasị na ihe ndi ozo.
Findchọtakwu ịhụnanya, ọ na-enyere aka ịmara na agụụ mmekọahụ na ịhụnanya, n'echiche nke njikọta, sitere na sistemụ abụọ dị iche iche, mana jikọtara na ụbụrụ. O nwere ike ịdị anyị ka anyị bụ ezigbo enyi ma anyị enweghi mmekọahụ. Anyị nwere ike inwe agụụ mmekọahụ maka mmadụ n’enweghị mmetụta nke nkekọ. A nguzozi ezi edozi nke ma ọchịchọ na bonding bụ ihe kasị mma ndabere maka a ogologo oge, obi ụtọ, mmekọahụ mmekọrịta. Ha abụọ bụ ụgwọ ọrụ nkịtị.
Onyinye okike ma ọ bụ nke mbụ bụ nri, mmiri, mmekọahụ, mmekọrịta ịhụnanya na ọhụụ. Ha na-ahapụ anyị ndụ ma na-eme nke ọma. Achọ ụgwọ ọrụ ndị a na-akpali site n'ọchịchọ ma ọ bụ agụụ site na neurochemical dopamine. Rewardsgwọ ọrụ nkịtị na-eme ka anyị nwee obi ụtọ mgbe anyị na-eri nri, na-a drinkingụ ihe ọ ,ụ ,ụ, na-amụ nwa ma na-azụlite. Mmetụta ndị dị otú ahụ na-enye obi ụtọ na-akwado omume ahụ ka anyị wee chọọ imeghachi ya. Mgbu n'ozuzu, karịsịa ma ọ bụrụ na ọ dị ogologo, na-ewepụ anyị. Nke ahụ bụ otu anyị si amụta. Omume ndị a ka achọrọ maka ịdị ndụ nke ụdị a.
Ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na-eji agụụ mmekọahụ anyị nwere, nke ka nke ndị na-eto eto eto, n'emeghị ka ha nwee mmetụta na ịhụnanya. Iri otutu porn intaneti n'ime oge nwere ike ibute ịda mbà n'obi na ọbụlagodi iri mmadụ ahụ na ụfọdụ ndị. Mụta otu esi ahụ n'anya n'ụzọ na-adịgide adịgide dị oke mkpa maka ọdịmma nke anyị ogologo oge.
Nke a bụ ndu ọsọ ọsọ ma dịkwa mfe iji ghọta ọrụ nke isi ihe na-eme ka anyị nwee mmetụta ịhụnanya. Cheta nsusu mbu gi?
Ashụnanya Dị ka Njikọ >>